Dad shacab ah oo lagu dilay Waqooyiga Gobolka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Dad shacab ah oo lagu dilay Waqooyiga Gobolka Mudug
Waxaana arintaan ay ku soo aadaysaa ayadoo gobolka ay ka socdaan howlgalo ka dhan Al-shabaab, oo ay wadaan Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Galmudug oo iskaashanaya, kuwaas oo la doonayo in kooxda Al-shabaab looga xoreeyo meelaha ay kaga suganyihiin deegaanada maamulka Galmudug.
GOLDOGOB, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya Gobolka Mudug ayaa sheegaya in xalay halkaas uu ka dhacay weerar lagu dilay dad shacab ah oo ahaa dadka deegaanka ku dhaqan.
Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dhagxanya-cad oo hoostaga degmada Goldogob ee gobolka Mudug, waxaana la sheegayaa in weerarka ay ka dambeeyeen rag hubaysan oo maleeshiya beeleed ah.
Inta la hubiyay laba Nin oo kamid ah xoolo dhaqatada deegaanka ayaa ku geeriyooday weerarka, halka mid kalena uu ku dhaawacmay, waxaanaa goobta markiiba ka baxsaday raggii hubaysnaa ee ka dambeeyay falka lagu dilay dadka shacabka.
Ilo deegaanka ayaa sheegay in weerarka lagu dilay dadkaa xoolo-dhaqatadaa ee ka dhacay deegaanka Dhagxanya-cadde oo ku dhow degmada Galdogob uu yahay mid la xriira aano qabiil oo horey uga dhacday Gobolka Mudug.
Wararkii ugu dambeeyay ee halkaa aan ka helayno waxa ay sheegayaan in xiisad ka dhalatay arrintaasi ay maanta ka taagan tahay deegaanada waqoooyi ee gobolka Mudug.